SVILUPPARE PUNTI CHIAVE DI FORZAUna volta che hai - Page 20 of 174 - https://themummichogblog.com
কিভাবে আপনার উপস্থাপনা সম্পর্কে? আপনি শক্তিশালী সমর্থন পয়েন্ট নিয়ে আসা পরিকল্পক টুল ব্যবহার করতে পারেন? আপনি অমিতা কাজ করেছে তাও, ট্রিপল এস ফর্মুলা মধ্যে তাদের করা যায়নি?
သငျသညျ, သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစီစဉ်ထားသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ပရိသတ်ကိုနားလည်ပြီးပြီပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုအမြဲသငျ့ပရိသတျ၏အသိပညာနှင့်အပြုအမူပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, သင့်တင်ဆက်မှု၏အသားနှင့်အာလူးဆုံးဖြတ်ရန်အနေအထား၌ရှိကြ၏။
“ငါသည်အဘယ်သို့ပြောသလဲ?” သငျသညျအနေဖြင့်တစ်ဦးတင်ပြချက်စီစဉ်သောအခါအမြဲကောင်းတစ်ဦးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပါပဲ။ သငျသညျဝေစုမှစိတ်ထဲ၌ကြီးစွာသောထိပ်တန်းအဆင့်သတင်းစကားတစ်ခုကြီးမားသောစိတ်ကူးရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်ဘယ်သို့ဆိုသလဲ?
သင့်ရဲ့တင်ပြချက်များ၏ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအံရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုသတိရပါ, သင်ပြီးသားပရိသတ်ကိုသူတို့သိရန်လိုအပ်ပါသောအရာကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်အဖြစ်သင်သည်သင်၏စိတ်တွင်တစ်ဝှမ်းအကြောင်းအရာလောကဓာတ်တွေအများကြီးရှိသည်ဒါကြောင့်သူတို့ကမေးလိမ့်မယ်မေးခွန်းများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ကထွက်ရရန်လိုအပ်ပါသည်ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရ။
နိဒါန်း, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်နိဂုံးပိုင်း: ထိရောက်သောတင်ဆက်မှုမှသုံးပိုင်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အရင်ထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံး key ကိုဆွဲဆောင်မှုအချက်များရရှိရန်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူစတင်ပါ။ ဒါကထို့နောက်အလွန်အစွမ်းထက်နိဒါန်းနှင့်နိဂုံးခြုပျဖနျတီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
သင်နှင့်ကဖေါ်ထုတ်ထို့နောက်သင့်ရဲ့စကားသံကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်အစာရှောင်ခြင်းအဖြစ် Talk ကို။
မြန်သင်သည်တတ်နိုင်သည်အတိုင်း, သင်လုပ်နိုင်သည်ကဲ့သို့အများအပြားအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက် လာ. ကွ။
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်မထားပါနဲ့။ လာကြသလိုသူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်။ သငျသညျစကားမပြောနိုင်သောအမှုအရာဟူမူကားအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ဆိုရင်တော့သင်တို့ရှိသမျှမှာဘာမျှမဟုအဆုံးသတ်ပေလိမ့်မည်။
သင်အခြေစိုက်စခန်းချွတ်င်ထင်တဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကဆွေးနွေးပါတယ်, သင်ကသင်၏အနေအထားကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ခြောက်ဆယ်စက္ကန့်ရှိဆိုပါစို့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသံဖမ်း။
Start ကိုဘယ်နေရာမှာမဆို။ သင်သည်သင်၏တင်ဆက်မှုအစမှာစတင်ပါရန်မလိုပါ။
ဦးနှောက်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယခုအခါသစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဤကဲ့သို့သောအချိန်လေးမှာလာကိုငါသိ၏။ အဆိုပါ “အေ့ဟေ!” ယခုအချိန်တွင်ကျွန်တော်မကြာခဏအတှေ့အကွုံကို “Gamma ဆူး” ဟုအဆိုပါ neocortex ဖြတ်ပြီး gamma-လှိုင်းလှုပ်ရှားမှု -a ရုတ်တရက် flash ကို, ဦးနှောက်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုစင်တာဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ဤရွေ့ကား gamma spikes သင်ကပတ်ပတ်လည်ပြဿနာရဲ့ “သို့သွားကြကုန်အံ့” နှင့်ပဲအခမဲ့-တွဲဖက်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်, ကျပန်းမှာဖြစ်ပျက်။  ဘယ်လိုလျင်မြန်သောညဏ်အကျင့်ကိုကျင့်ကြောင်းပါပဲ။ အားလုံးအကြီးအသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ပြီးသားလုပ်ခဲ့တယ်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူသင့်ဦးနှောက်သင်သည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုထုတ်-အတိအကျသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များ synthesize ရမှည့်သောဖြစ်ပါတယ်။
မိမိအသစ်ကိုတင်ဆက်ဘို့, tad Post-it မှတ်စုအပေါ်လျှင်မြန်စွာရေးအတွေးအခေါ်များကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အားသာချက်သူအုပ်စုတစ်စုတတျနိုငျသသူညဏ်ကိုလက်စသတ်သောအခါ, မှတ်စုစီစဉ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ လာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်တွင် tad ရဲ့မှတ်စုကိုကြည့်ပါ။
အခုတော့ tad ရဲ့အလုပ်ကဤအတွေးအခေါ်များအချို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပေးဖို့ဖြစ်တယ်။
အဆိုပါဒေတာနှင့်အတူစတင်သူသည်ဒေတာတယ်ကိုဘယ်လိုပြောပြ, ပြီးတော့ (လာမယ့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သူ၏နောက်ဆုံးမိန့်ကိုကြည့်ပါ) ဒေတာကိုရှင်းပြ: ထို့နောက်သူသူ့ကိုမှယုတ္တိသလိုပဲတစ်ခုနိုင်ရန်အတွက်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက်စိတ်ကူးများစီစဉ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံး tad မှာမိမိစိတ်ကူးများစည်းရုံးခဲ့ကြောင့်ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့သာတစ်နှစ်ခွဲနာရီအကြောင်းကိုသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခဲ့ကြသည်သော်လည်း, တင်ပြချက်ရိုးရှင်းတဲ့ပါလိမ့်မယ်: သူ့သစ်ကိုပြိုင်ကားဝတ်စုံကိုပိုမိုမြန်ဆန်အခြားမည်သည့်ဝတ်စုံထက်ကြီးသူကဖြစ်သက်သေပြနိုင်
ပိုမြန်, ထိုသို့ပိုမြန်ခဲ့ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်သူသည်သင်တို့ကိုပြောပြနိုင်ဘူး။ ဒါကသူတို့ရဲ့ပါရာဒိုင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်အပေါင်းတို့သည်သူ၏စကားကိုနားထောငျခဲ့သညျ။ ဘာမှပိုပြီးသာ, သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ရှုပ်ပွနေအောင်အဆိုပါအချက်အလက်များ၏သက်ရောက်မှု muddy နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှောင့်နှေးလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကြိုးစားပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးများနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူပြီးတော့အုပ်စုတစ်စုကသူတို့ကို။ သင်သည်သင်၏အတွေးအခေါ်များတို့တွင်ဆက်သွယ်မှုအဘယ်မှာမြင်သနည်း ထက်ပိုမသုံးအဓိကအုပ်စုများအတွက် shoot, ထို့နောက်အုပ်စုတိုင်းအတွင်းနိုင်ရန်အတွက်စိတ်ကူးများစီစဉ်ပါ။ ဒီအုပ်စုတွေသင့်ရဲ့တင်ဆက်မှု၏အဓိကအကြောင်းအရာများဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့် tad စိတ်ကူးများသုံးခုအုပ်စုများနှင့်အတူတက်လာခဲ့တာလဲ အဘယ်ကြောင့်မပေးလေးငါးခြောက်?
သူကစမတ်ရဲ့လို့ပဲ။ သူ၏တနျခိုးသိတယ် “သုံး။ ” စိတ်ပညာရှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ, သုံးတောင်းဆိုမှုများနွဲ့နေကြသည်, ထိုတွေ့ပြီနှစ်ခုမကြာခဏအလုံအလောက်မဟုတျပါ, ဒါပေမယ့်လေးများလွန်းဖြစ်ကြသည်။ ပါမောက္ခ Suzanne ခ Shu နှင့် Kurt အေ Carlson ပြော, “နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများ [နားထောင်] သံသယတွေနဲ့အပေါငျးတို့သတောင်းဆိုမှုများမြင်သောအချိန်တွင်စတုတ္ထပြောဆိုချက်ကို, သည်အထိပိုကောင်းပါ။ ” အဆိုပါသုတေသီများ “သုံး၏ကျက်သရေ” လို့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပဌနာနှင့်ကပျမ်းမျှလူတစ်ဦးရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အတွက်ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်မျှနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပြီးသံသယ။ 
သင်တန်း၏, အကြီးအ communicators အမြဲသုံး၏ကျက်သရေနှင့် ပတ်သက်. လူသိများကြပြီ သူတို့မကြာခဏလက်ဆောင်သုံးခုအတွေးအခေါ်များ, သုံးအဓိကအချက်များ, ဒါမှမဟုတ်သုံးတွေ့ရှိချက်တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံဒါကြောင့်ပါပဲ။ လင်ကွန်းက “လူတွေကအသုံးပြုပုံလူများအစိုးရ, လူများအတွက်။ ” ၏ပြောသော ပြင်သစ်စကားပြော “လွတ်လပ်မှု, တန်းတူညီမျှမှုနှင့်ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား။ ” ကဲသာဘုရငျကပြောသည် “ကျနော်မြင်, ငါလာ, ငါသိမ်းပိုက်။ ” (သတိပြုပါကျနော်တို့ကိုသင်ဥပမာသုံးခုကိုပေး၏။ )
-Philip Crosby သည်
ပုံပြင်, သီချင်းများနှင့်ပြက်လုံးသုံးယောက်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ ( “သုံးယောက်ျားတွေဘားသို့လမ်းလျှောက် … “) ။ သဘာဝ Diane Ackerman ဒီပုံစံအပေါ်ထင်ဟပ်: “ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောနံနက်, မွန်းတည်နှင့်ညဉ့်ကဲ့သို့ threesomes အတွက်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီး obsessively ကြောင်းပုံစံများနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဒါနေ; Macbeth ရဲ့သုံးလိုက်တယ်အစ်မတွေ; ပညာရှိသုံးဦး, အဆင်သင့်, အစုံ, go; တစ်ဦး sonata ရဲ့သုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသပုံစံ; အဆိုပါ Genie ရဲ့ပေးအပ်သုံးဆန္ဒကို; သေးငယ်အလတ်စားနှင့်အကြီးစား; ABCs; Goldilocks နှင့်သုံးဝံ; သုံးယောက်နည်းနည်းဝက်; နောက် … ပြီးတော့။ သုံးရွေးချယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ “
ကိုသတိရပါ, ငါတို့သည်သင်တို့၏တင်ပြချက်သုံးပိုင်း၌တည်ရှိ၏ကလည်း, အဆိုပါမိတ်ဆက်ခြင်း, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်နိဂုံးပိုင်း။ ဒါကြောင့်ယခု, သင်သည်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသုံး key ကိုမှတ်ရှိသည်။ ယခုတွင်သင်သည်၌ထားတော်မူ၏ကိုအဘယ်သို့မိန့်ဆုံးဖြတ်။
သုံးဆ S ကဖော်မြူလာ
ကျနော်တို့လူတွေကသူတို့စကားကိုနားထောငျပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးသောအရာတို့ကိုသတိရကြောင်းကိုငါသိ၏။ သူတို့ကအစထပ်ခါတလဲလဲသတင်းအချက်အလက်သတိရပါ။ နိယာမရိုးရှင်း: သင်၏မှတ်ပထမနှင့် Make နောက်ဆုံး-The အထပ်ထပ်လူတွေကိုသတိရကူညီဖို့ကနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ဉာဏ်ကျွန်ုပ်တို့စကားကိုနားထောငျသောအရာကိုသာ-bits နှင့်အပိုင်းပိုင်းသတိရကြောင်း, leaky ဖြစ်ပြီး, ကျွန်ုပ်တို့သတိရထင်သောအရာကိုအများကြီးမှားပါကြောင်းကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုငါသိ၏။ စိတ်ပညာရှင်တစ်နည်းနှစ်ဆပိုများလာ  “အမြင်ကနေမှတ်ဉာဏ်မှမှားယွင်းစွာ encoded ခံရဖို့သတင်းအချက်အလက်မျိုးစုံကိုအခွင့်အလမ်းများရှိပါတယ်” ဟုပြောပြန်သငျသညျနားလညျမှုလှဲမှားဖို့သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ဖြတ်ဘဲနေလျှင်, ပရိသတ်ကိုရုံပိုင်ခွင့်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
နည်းလမ်းသငျသညျကလူကိုမှတ်မိ-နှင့်နောက်ဆုံးကထပ်ချင်သောအရာကိုပထမဦးဆုံးဟုသော။ ဒါကအဓိကအချက်အလေးပေးပေးသည်။ သင်တို့သည်လည်းနှေးကွေးခြင်းနှင့်သင်သော့ကိုမှတ်ကယ်နှုတ်တော်မူသောအခါအရှင်းလင်းစွာမပြောတတ်သငျ့သညျ။ သင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အခါသင်အဆုံးမှာလာကြတယ်လိုင်းကယ်နှုတ်တော်မူရဲ့အစမှာကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေး Cathy Davidson အတွက် CUNY ပါမောက္ခများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူ, “အရ, သင့် diction အများကြီးပိုနှေးသည်နှင့်သင်၏စကားဂရုတစိုက်င-သီလရှင်-ci များမှာ -a-TED ။ “
သငျသညျ, အသီးအသီး key ကိုအမှတ်ဖော်ပြကြောင့် support, ထိုသို့အနှစ်ချုပ်သငျ့သညျ။ ကျနော်တို့ Triple S ကဖော်မြူလာတစ်ခုကိုခေါ်ဆိုပါ။
“ဒီဇစ်နဲ့ချုပ်ရိုးတစ်စက္ကန့်နှစ်ထပ်ကိန်းမီတာလျှင်2အကြောင်းကိုလီတာအားဖြင့် permeability အချက်ပြုစုပျိုးထောင်ချထားပါသည်။ အင်အားသုံးတိုင်းတာဝတ်စုံကိုအရွယ်အစားအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြပြီးဒီဆလိုက်ညွှန်ပြအဖြစ်, လေခွင်းဆွဲ7အကြောင်းကိုရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးခြားနားအောင်လုပ်ပေးသောကွောငျ့ထို့အပြင်အဆိုပါဝတ်စုံကိုအနည်းငယ် undersized ဖြစ်ပါတယ်။ undersizing အားဖြင့်ငါတို့သည်အနည်းဆုံး2လီတာနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးအားဖြင့် permeability မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်အောင်မြင်မှုများတစ် textured, dimpled-ဖှဲ့ sharkskin ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေတိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုအီလက်ထရောနစ်ဏုလက်အောက်တွင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာ 250 မီတာသွားလာသင်တန်းကျော်ထပ်တိုး permeability7လီတာအကြောင်းကိုဖွင့်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ ”
“ဒီဝတ်စုံကို 11 အကြောင်းကိုလီတာကိုပိုပြီး permeable စျေးကွက်ပေါ်ရှိအခြားဝတ်စုံထက်ဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီနေရာတွင်ကဆင်းချိုးကိုဘယ်လိုဖွင့်:
“ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ 250 မီတာသွားလာသင်တန်း simulating တစ်လေတိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုအီလက်ထရွန်အဏုသုံးပြီးသက်သေပြရာ textured, dimpled-ဖှဲ့ sharkskin, အသုံးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုများဒီဇိုင်းကနေ7လီတာရ။
“ကျနော်တို့ကလည်းလေခွင်းဆွဲ၏7ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလျှော့ချသောအနည်းငယ်ဝတ်စုံကို undersizing နေဖြင့်2ပိုပြီးလီတာရ။
“ငါတို့သည်မီတာလျှင်2ပိုပြီးလီတာပုဇစ်နဲ့ချုပ်ရိုးဒီဇိုင်းပြန်လည်းရေးဆွဲနေဖြင့်တစ်စက္ကန့်နှစ်ထပ်ကိန်းအရ။
“ဒါကမဆိုအခြားဝတ်စုံကိုထက် permeability 11 ထက်ပိုလီတာအထိကထပ်ပြောသည်။ ”
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအလွန်အမင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသော်လည်းကျွန်တော်တို့အများစုကအများကြီးပိုကောင်းဥပမာ 1. ထက်ဥပမာ2လိုကျလြှောကျနိုငျအဓိကအချက် ( “သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝတ်စုံနှင့်အတူလေထု၏ 11 ထက်ပိုလီတာရ”) ရှေ့ကိုတက်လာ; ထို့နောက် data တွေကိုထောက်ပံ့သုံးခုပစ္စည်းများပြီးနောက်, အကျဉ်းချုပ်ဝါကျအထုပ်အပေါ်သက်တံ့ခညျြမနှော။
tad ဒီ key ကိုအမှတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စီမံ tool ကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံကိုစာမျက်နှာ 71 ရက်နေ့တွင်သတိပြုပါ။
ဒီမှာမူအရရိုးရှင်း: တစ်အချက်ထပ်လွယ်ကူမှတ်မိဖို့စေသည်။ အထပ်ထပ်မှတစ်ဆင့်သင်သည်သူတို့၏ဦးနှောက်သို့သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှု, အခိုင်မြဲ “အေ့ဟေ!” တစ်ဦးပါရာဒိုင်းပြောင်းရွှေ့ရသည်ခဏ။ Professional က persuaders ဒီနိယာမ၏ကောင်းစွာသတိပြုမိပါ၏ Malcolm Gladwell Nike, Coca-Cola ကနားလည်သောအရာကိုသဘောပေါက်နားလည်ခြင်း “ဟုဆိုအဖြစ်: သူတို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နေရာအနှံ့-လျှင်သူတို့လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ပေါ်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်အတွင်းမှထုတ်ကုန် display တွေပေါ်အဆင်ပြေစေရန်-store ကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်, အဆောက်အဦ၏နံရံအင်္ဂတေကသူတို့ကိုနိုင်စေ T-ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်ပေါ်တွင် the hood ကိုများနှင့်ပြိုင်ကားကားခေါင်မိုးပေါ်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ရောင်စုံန့်အတွက်မဂ္ဂဇင်း-သူတို့လျစ်လျူရှုဖို့သူတို့ရဲ့သတင်းစကားမဖြစ်နိုင်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါလျှို့ဝှက်လှည့်စားပေမယ့်အထပ်ထပ်မဟုတ်ဘဲ artful ချည်ငင်ပေမယ့်လွင်ပြင်စကားပြောမဟုတ်ပါဘူး။ “
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့နားထောငျသူမြား၏ဦးနှောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့် reengage ရန်, လစျြလြူရှုရန်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမဖြစ်နိုင်အောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ, ဖျော supporting များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ key ကိုအမှတ်စုစည်းတင်ပြရန်ကလုပ်ပါ။
သငျသညျမရမယ့်တရားဝင်တင်ဆက်မှုအတွက်များစွာသောဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေများ၌ဤ Triple S ကဖော်မြူလာကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်တစ်ဦးအစည်းအဝေးတွင်တုံ့ပြန်နေတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့သူဌေးကိုသင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်အခါသင်တစ်ဦးကို client နှင့်အတူဖုန်းပေါ်မှာဆိုရင်သောအခါအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါပုံသေနည်းသင်၏နားဆင်သင့်ရဲ့ရမှတ်ကိုမှတ်မိနားလည်ကူညီပေးသည်။
Amita ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာတော့သူမကသူတို့လိုအပ်ထက်ပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းစာရင်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှသူမ၏ဝယ်လက်ကိုပြောသည်။ သူမသည်ကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံသုံးမှတ်နှင့်အတူတက် လာ. နှင့်ထိုအချက်များကိုထွက်အစီအစဉ်ဖို့ Triple S ကဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ (Amita ရဲ့အဓိကအချက်ကိုအောက်တွင်စတင်သောပုံဥပမာကိုထွက်ကျိုးကြပုံကိုကြည့်ပါ။ )
Amita ပုံမှန်ထုတ်လုပ်သူ-အစား၏ “အခြားသူတွေ” သူမကသူတို့ကိုဖြေရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်ကြဘူးအဖြစ်သူမ၏ဖောက်သည်များအတွက်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှဘယ်လိုသူမ၏ကုမ္ပဏီကွဲပြားခြားနားတဲ့ယုံကြည်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြနေသည်။ ယခုမှာသူမသုံးခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံအားပေးမှတ်ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုကော? သငျသညျခိုငျမာထောက်ပံ့အချက်များနှင့်အတူတက်လာဖို့စီမံ tool ကိုသုံးနိုငျသလဲ Amita ပြုတော်မူပြီသကဲ့သို့သင်တို့က, Triple S ကဖော်မြူလာသို့သူတို့ကိုငါထည့်ပေးလို့ရပါသလား?
Razvijanju jakih KLJUČNI BODOVA
Nakon što ste planirali svoju poruku, razvijen vaš cilj, i shvatiti publike, vi ste u mogućnosti da se utvrdi meso i krompir vaše prezentacije, uz vaš cilj uvijek bio da prebaci znanje i ponašanje publike.
“Šta da kažem?” To je uvijek dobro pitanje kada planirate prezentaciju. Možda imate veliku poruku na najvišem nivou u vidu, velika ideja da se udio, ali šta vi zapravo rekao?
Najbolji način da se razvije sadržaja za tijelo vaše prezentacije je da se razmisle. Ne zaboravite, već puno naučili kroz analizu publike, razmišljam o onome što im je potrebno da znaju, kao i pitanja mogu pitati, tako da imate puno sadržaja vrtložne oko u glavi. Sada samo treba da ga i dobiti u organizaciji.
Postoje tri dijela na efektnu prezentaciju: uvod, tijelo i zaključak. Počnemo sa tijela da se naš najveći ključ uvjerljivi ističe prvi. To će onda nas voditi da se stvori vrlo moćan uvod i zaključak.
Evo nekih metoda brainstorminga pokušati:
Saznajte sve misli iz glave na papiriće, dodirnite ga na tastaturi, ili koristite palac na pametnom telefonu kako god je najudobniji za vas.
Razgovarajte što brže možeš i snimiti svoj glas, onda prepisati ga.
Doći do što više ideja kao što možete, kao brz kao možete.
Nemojte suditi svoje ideje. Samo ih snimite kao oni dolaze. Ako ste zabrinuti zbog govore gluposti, možda ćete završiti govoreći ništa.
Zamislite vi raspravljali neko ko misli da si van baze,aimate šezdeset sekundi da brani svoju poziciju. Snimite sebe.
Početi bilo gdje. Ne morate da počne na početku svog izlaganja.
naučnici mozak sada znamo da nova saznanja doći u ovakvim trenucima. Je “aha!” trenutka kada smo često iskustvo u pratnji “gama spike” -a iznenadni bljesak gama-talasa preko neokorteks, mozak kreativnosti centar. Ove gama šiljci dogoditi slučajno, obično kada ih “IDEMO DALJE” problema i samo slobodni saradnik oko njega.  Tako brze brainstorming radova. Sa svim velikim okupljaju već učinio informacije, tvoj mozak je zrela sintetizirati i dobiti svoje najbolje ideje van upravo ono što vam je potrebno da podrže vaše svrhu.
Za svoj novi prezentacije Tad je odlučio da pisanje ideje brzo na pisamaca. Prednost ovog pristupa je da je mogao grupe i organizirati bilješke kada je završio brainstorming. Pogledajte Tad je bilješke na sljedećoj stranici.
Sada Tad posao je bio da se ove ideje neke strukture.
Kao prvo, on ih u logičke grupe i dao oznaku za svaku grupu.
Onda je uređen ideje u svakoj grupi u kako bi se činilo logično da ga: start sa podacima, reci kako je dobio podatke,azatim objasniti podataka (vidi svoj konačni poredak na sljedećoj stranici).
Na kraju Tad je imao svoje ideje u organizaciji, i trebalo mu je samo pola sata da radim ovaj posao. Iako su detalji tehničke, prezentacije će biti jednostavan: Njegov novi racing odijelo je bio brži od bilo koje druge odijelo, nije mogao dokazati da je to
brže i nije mogao reći zašto je bio brži. Ovo je sve svoje slušaoce potrebno da prebace svoje paradigme. Ništa više bi zatrpavaju samo njihov mozak, muti uticaj podataka, i odgoditi odluku.
Pokušajte ga sami. Brainstorm svoje ideje,azatim grupa njih. Gdje vidite veze između svoje ideje? Pucati za ne više od tri glavne grupe,azatim organizirati ideje kako unutar svake grupe. Ove grupe će postati glavna tema vaše prezentacije.
Erdogan dice che le azioni dellEgitto in Libya son
Capitolo 1 La FondazioneE tutto su di collegamento
W ats up futuro Questa era la domanda alla base
48 nuovi19 COVID casi nove anziani legatiacase d
Maltese MEP Agius Saliba vuole porre fine Netflix